Ny maody fitehirizana bateria ao amin'ny iOS 9 dia mampihena ny herin'ny iPad | Vaovao IPhone
Androany isika dia hiresaka momba ny maody "fitsitsiana bateria" andrasana izay amin'ny beta voalohany an'ny iOS 9, na dia misy aza io dia tsy nandeha mihitsy. Ity maody ambany herinaratra ity dia hanome araka ny Apple hatramin'ny adiny telo amin'ny fiainana batterie fanampiny rehefa alefa, ovao ireo minitra vitsy ireo ny fiainana, ny fitaovana dia hampidina ny zava-bitan'ny CPU sy ny lafiny hafa mifandraika amin'izany. Rehefa avy nampiasa fampiharana izay mandrefy ny fahombiazan'ny processeur izahay dia afaka nanamafy izany fanambarana izany.
Ity maody fanangonana bateria ity dia mampihena ny fahombiazan'ny processeur an'ny fitaovana hatramin'ny efapolo isan-jato. Vokatr'izany, mba hanomezana ohatra, ny iPhone 6 amin'ny maody ambany dia mety hanolotra fampisehoana mitovy amin'ny iPhone 5 amin'ny resaka CPU madio, na izany aza. Hitako fa somary manaitaitra ity statistika ity, ka aleoko tsy mirona be loatra amin'ny angon-drakitra marinaSatria fantatsika fa izany rehetra izany dia miankina amin'ny fandefasana ny rindranasa ao ambadika, ny fampiharana apetraka ary ny serivisy peripheral activated, dia mitovy ny fitaovana, fa samy hafa ny mpampiasa tsirairay.
Manatanteraka ny refy, ny iPhone 6 Plus iray dia nahazo isa 1606 tamin'ny fanandramana tokana processeur 2891 tamin'ny andrana multi-processeur. Etsy ankilany, amin'ny maody ambany herinaratra ity fampisehoana ity dia nilatsaka marobe tamin'ny isa 1019 tamin'ny maody tokana ary 1751 raha toa ka misy processeur multi. Toy izany koa, ny valiny dia nifanaraka indrindra tamin'ny toe-javatra nisy ny iPhone 5S, izay nahatonga ny 1386 tamin'ny fikirakirana maro ary ny 816 amin'ny fotony tokana, izay amin'ny fe-potoana isan-jato dia mitovy tanteraka amin'ny an'ny iPhone 6 Plus.
Ireo fitsapana ireo dia notontosaina tamin'ny beta faharoa ho an'ny mpamorona iOS 9 izay natomboka andro vitsy lasa izay, na dia betsaka aza ny antenaina amin'ity fomba fitahirizana vaovao ity sy avy amin'ny rafitra amin'ny ankapobeny, misy volana maromaro mbola miandry fa hahita vaovao ary betas be optimised kokoa. iOS 9 dia hanolotra antsika hampiasa ny maody fitehirizana bateria rehefa mahatratra bateria 20% ny iPhone, na bateria 10% raha mandà tsy hampandeha azy amin'ny fampandrenesana voalohany isika. Raha vantany vao navadika, ho mailo azy, lasa mavomavo ny kisary bateria
Tsy isalasalana fa ity fomba fanavotana bateria vaovao ity dia hamonjy toe-javatra maro, indrindra ho an'ireo rehetra mampiasa iDevice ho fitaovana asa. Antenaina fa manohy manatsara ny zava-bitany i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny fomba fitehirizana bateria ao amin'ny iOS 9 dia mampihena ny herin'ny iPad
Jailbreak iOS 9: TaiG dia efa mandroso amin'ny kininy
Ny fomba fanavotana batterie an'ny iOS 9 dia mampihena ny fahombiazan'ny iPhone ihany koa